खुट्टाको नशा बटारिएर फुल्ने गरेको छ ? भने आजैबाट खान छोड्नुहोस् यस्ता चिज – Dainik Samchar
August 18, 2021 694
यसरी न,शा सुन्निनु भनेको न,शाहरु काम नलाग्ने हुनु हो। यस्तो स-मस्याको समाधान गर्न अहिले सजिलो विधिबाट उपचार गरिन्छ। खुट्टाको न,शा फुल्ने स-मस्याको उपचारमा सबैभन्दा भरपर्दो र उ#च्च गुणस्तरीय प्रविधिलाई ‘रे’डियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन’ भनिन्छ।
धुलिखेल अ-स्पतालमा सन् २०१३ अगस्टबाट सेवा सुरु गरेपछि हालसम्म चार सयभन्दा बढी बिरामीले रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन गराइसकेका छन्। विभिन्न चरणमा गरिएका अध्यनन अनुसार रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन गराएका बि’रामीमा फेरि न,शा सुन्निने स-मस्या दोहोरिएको पाइएको छैन।
कसरी हुन्छ रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन ? यो एक प्रकारको श”ल्यक्रिया नै हो। जसमा भेरिकोज भेन (नशा सुन्निएको) भएको खुट्टालाई पूरै अथवा आंशिक रुपमा केही समयका लागि बेहोस गरिन्छ।
त्यसपछि घुँडाभन्दा तलको फुलेको न,शाको भागमा सियोको मध्यमबाट रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसन गर्ने मसिनो तार छिराइन्छ।
यस तारलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको माध्यमबाट भेरिकोज भेन भएको नशाको मु:ख्य भागसम्म छिराइन्छ।
त्यसपछि छाला तथा भित्री नशालाई हानी नहुने किसिमले भेरिकोज भेन भएको नशालाई सात-सात सेन्टिमिटर गर्दै पूरै नशालाई जलाइन्छ। यो प्रक्रियाका लागि करिब १५ देखि २० मिनेट समय लाग्छ।
रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसनपछि कुनै-कुनै भागमा औषधि हालेर जलाइन्छ भने कुनै भागमा सानो आकारमा चिरेर खराब नशालाई बन्द पनि गरिन्छ। रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसनपछिको अवस्था रेडियोफ्रिक्वेन्सी अबलेसन गरेपछि सोही दिन अथवा भोलि पल्ट बिरामी घर जान सक्छन्।
बि,रामीले दैनिक क्रियाकलाप भोलि पल्टैबाट सुरु गर्न सक्छन् भने अवस्था हेरेर ३-४ दिनमा नियमित काममा फर्किन सक्छन्। रेडियोफ्रिक्वेन्सी एबलेसनपछि करिब दुई साता ब्यान्डेज लगाउनु राम्रो हुन्छ। विशेषगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका बिरामीको ह,कमा १२ दिनपछि लामो यात्रामा तथा काममा फ,र्कन मिल्छ।
Prevआज २ भदौ २०७८, बुधवार : आजको राशिफल
Nextयी हुन् चर्चामा रहेका ५ नेपाली गायिका : तपाईंको मन पर्ने को ?
कुलमानको कार्यकारी निर्देशकको पद धरापमा ?